Ingxaki 2: I-Acer Aspire One: I-Skype ayinakuqhagamshela-iGeofumadas
Agasti, 2009 Internet kunye neBlogs
Sabona indlela yokuyisombulula i ingxaki yesandi ye-Acer Aspire One, ngoku kuye kwafuneka ndilwe kuba ngequbuliso akunakwenzeka ukuba uqhagamshele kwi-Skype, ngoko ngequbuliso.
Kutheni ndisebenzisa i-Skype?
Ndiqale ndangena njenge-hobbyist kodwa emva kokuba kufuneka ndihamba kakhulu kwaye ndisiya emsebenzini wabantwana bam ebusuku, incoko yomsindo nevidiyo ibandakanyiwe intle. Bafuna kuphela incwadi yomsebenzi wasekhaya, kwaye ndingacacisa ukuba zenziwa njani, okanye ndijonge ukuba zilungile na.
Njengoko kufuneka ndihambe ngaphandle kwelizwe kaninzi ngonyaka, ndiye ndaziqinisekisa ukuba ndiza kuthatha isicwangciso, ngenxa yezizathu ezininzi, kubandakanya:
Kungabizi kum ukuba ndithethe ngeskype ukuya kwamanye amazwe, iifowuni okanye ii-mobiles ezivela kwiisenti ezimbini. Sebenzisa amakhadi ahlawulelwa kwangaphambili avela kumnikezeli wefowuni ephathekayo unyuka ukuya kumaxesha ali-2 oku (awasekhaya).
Ndikwazile ukuba nenombolo emiselweyo ngelixa ndandihamba eMelika.
Ndingabhatala ngePaypal, kwaye ngaloo ndlela ndiyikhulule loo mali iza kum ngenkxaso-mali, kodwa andikwazi ukudlulisela kwiakhawunti yebhanki kuba ilizwe lam alisebenzi.
Kodwa ngequbuliso: plop !,, khange ixhume.
I-Skype egqityiweyo inceda ukutsho izinto ezinokwenzeka, ukuba iproper, ukuba ichwecwe ivaliwe, ukuba i-80 port kufuneka igxothwe ... njl.
Kodwa ke, kubalulekile ukwenza iimvavanyo ezisisiseko, umzekelo: kunokubakho ukungqubana kwizibuko elisetyenziswa yikhamera yewebhu edityanisiweyo kwiAcer Aspire One, eneSkype. Ukwenza oku, kuya kufuneka ususe ukhetho lokuba amazibuko angama-80 kunye nama-443 asilele.
Oku kwenziwa kunxibelelwano lweSkype, "izixhobo, iindlela zonxibelelwano", khubaza ukhetho kwaye ubeke izibuko ngokuthanda. Esi sisombululo asisebenzi kuphela kwi-Aspire One, kodwa nakweyiphi na ikhompyuter esebenzisa iWindows.
Kodwa imveliso ayizange ibe njalo, ndicinga ukuba ndihlekisiwe ngeyure ezimbini endizabalazayo ukubona ukuba inokuba yintoni, nonyana wam kwelinye icala endilinde ukuba ndimncede ngomsebenzi ohambelanayo. Ndabhenela kumgaqo oqhelekileyo: ukuba ndiyifakile okoko yagqibela ukusebenza.
Lo matshini mncinci awuhambisi iinkqubo ezininzi, yintoni benditshilo ngaphambili. Kuya kufuneka uyigcine simahla kwizinto eziza kulayisha imemori yakho, ke ngoko kwakulula ukwazi into oyifakileyo mva nje.
YayiyiPanda Antivirus, awayebhenele kuyo njengongxamiseko. Ngesizathu esithile, le antivirus, elungileyo kakhulu, ineengxaki ezinkulu zokumisela ukungafani komntu onegunya lokusebenzela omnye kwaye ukuba ifumana enye inkqubo ekhuphisana nayo, kubonakala ngathi ibhloka onke amathuba. Kucingelwa ukuba isombulula ngolu hlobo:
"Qala, iphaneli yokulawula, iwindows firewall"
Ukungena apha kusebenze i "ngaphandle" ithebhu, ivumela i-Skype ukuba ivunyelwe. Kodwa nangona ndizamile iindlela eziliwaka, khange isebenze.
Ke, ndingakhange ndiyikhuphe iPanda, okwangoku, Ndisuse uqhagamshelo lwe-Intanethi ukunqanda nayiphi na intlekele ukuba ingenzeki kum ngaphandle kwe-antivirus. Emva koko ndafaka Kaspersky, endiqhele ukuyisebenzisa, kwaye endihlawulele iidola ze- $ 29, ngaphantsi kakhulu kolwazi lwam kufanelekile.
Akucetyiswa ukuba ube nee-antivirus ezimbini kumatshini omnye, njengoko umntu enokuthintela iistrike zomnye, ngokwesiqhelo uhlaziyo oluzenzekelayo.
Ngapha koko, ukuba ufumanisa ukuba i-Skype ayixhumi, kufanelekile ukukhangela ukuba ngaba intsholongwane inetyala.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Arivte, eninzi kwiiNjineli zoLuntu
Post Next Susa i-Ribbon ngo-AutoCAD 2009?Okulandelayo »
Iimpendulo ezi-3 ziye kwiNgxaki 2: I-Acer Aspire One: Iskype asizukuxhuma
Ndinengxaki ne-skype yam, ayindivumeli ukuba ndiqhagamshele kwikhompyuter yam nakwabanye ukuba iyandivumela ukuba ndixhume kwiakhawunti yam, ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ndingenza ntoni
Molo Cristian, ngokweempawu zeqela lakho, kuya kufuneka uzame ngakumbi ingxaki ye1 , into ebendithetha ngayo xa umsindo uvalekile
Ewe ... ndinengxaki efanayo, benditshintsha imodeli ngaphambi kweentsuku ezisi-7, kuba xa ndiqala incoko yokufowuna ividiyo, ngokungacwangciswanga, kwaye amaxesha ngamaxesha iyabanjwa ingxola ngokungathi sicofa isitshixo ngaphandle kokuma Akukho ndlela yokuyisusa ukuba ayisiyondlela yokugcina iqhosha lamandla licinezelwe imizuzwana emi-4 ...
Ndiza kuzama ukhetho lwamazibuko e-skype, ukubona ukuba luhlobo oluthile lokungqubana kunye nokuhamba kwekhamera encinci ... andazi ... ukuba emva kweentsuku ezi-5 ngaphezulu kwale intsha bandinike yona namhlanje iyafana, ndiya kuyichasa i-ASPIRE NYE.
Ukuba umntu wehlelwe nguwe wasombulula ... nceda ucebise njani